Puntland oo shaybaar cilmiyeedka dambiyada ee ugu horeeyay ka sameysay gudaha magaalada Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo shaybaar cilmiyeedka dambiyada ee ugu horeeyay ka sameysay gudaha magaalada Garoowe
Puntland oo shaybaar cilmiyeedka dambiyada ee ugu horeeyay ka sameysay gudaha magaalada Garoowe
September 5, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Shaybaar cilmiyeedka dambiyada ee Puntland. [Xigashada Sawirka: Shareeco Yaasiin Shareeco]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa shaybaar cilmiyeedka dambiyada ka sameysay gudaha magaalada Garoowe, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Puntland.
Shaybaarka ayaa baari doona oo kala saari doona dambiyada iyada oo loo marayo qaab saynis ah, sida ay sheegeen saraakiisha Wasaaradda Caafimaadka.
Farsamoyaqaanada shaybaarka ayaa awood u yeelan doona in ay xogtooda u sharaxaan garyaqaanada iyo dambi baarayaasha iyo sidoo kale saraakiisha fulinta sharciga.
Waa shaybaarkii ugu horeeyay ee dambiyada oo laga furo gudaha Puntland.
Chairman of Somalia’s Supreme Court sacks 18 judges in Banadir region
Nabadoon cusub oo lagu caleemosaaray Garoowe
Madaxweynaha Puntland oo xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada gelinkii dambe ee Axada. Afar garsoore oo kale oo katirsan maxkamada ciidamada ayaa la [...]
Mukhtar Roobow surrenders
Baidoa-(Puntland Mirror) Former Al-Shabab leader Mukhtar Roobow has accepted to surrender to the Somali federal government, officials confirmed. The surrender came after closed-door meeting between officials from the Somali government and Roobow, which took place in [...]